15 + Of Anime ugu Weyn LIKE My Hero Academia! - Kale
Jacaylka My Hero Academia? Kadibna Halkan waxaa ah 15 Riwaayadaha lagu taliyay ee Anime!
Dunida manga iyo anime ayaa caan ku ah kala duwanaanta, waxaana lagu xusay kakanaanta.
Ilaa iyo anime iyo manga noqday caalami, Caan ka noqoshadiisu way sii kordhaysay xitaa Galbeedka, halkaas oo buuga majaajillada iyo dhaqamada animationku aad uga duwan yihiin.
Maanta waxaan diirada saari doonaa a shōnen anime loo yeedhay Halyeeyga tacliinta .
Kuwa idinka mid ah ee aan aqoon Halyeeyga tacliinta waa manga / superhero / fantasy manga iyo taxane anime oo raacaya dhalinyarada Izuku Midoriya. Iyo dadaalkiisa ah inuu noqdo geesiga ugu weyn ,.
Halyeeyga tacliinta waa mid ka mid ah manga-ga iyo anime-ta casriga ugu caansan, oo leh faan weyn oo caalami ah oo si joogto ah ula socda dhacdooyinka Izuku iyo jilayaasha kale.
Waa kuwan 15ka taxane anime ee ugu fiican ee la mid ah Halyeeyga tacliimeed!
1. Kubbadda Dragon
Akira Toriyama ee xayeysiisyada caanka ah ee caanka ah waxay ku bilaabatay Kubbadda Dragon.
Waa taxane manga ah oo raacaya wiilka yar ee Goku ee ku saabsan xiisaha uu u qabo inuu noqdo dagaalyahankii ugu weynaa adduunka khiyaaliga ah.
Iyada oo ku saleysan sheeko-dhaqameedkii hore Safarkii Reer Galbeedka , taxanaha wuxuu leeyahay Son Goku oo wajahaya cadawyo kaladuwan oo ku socda wadadiisa ah inuu noqdo mid kafiican uguna bislaada howsha.
Kubbadda Dragon malaha waa manga-ga fanka legdinta ugu fiican ee halkaas ka jira iyo talo qeexan oo naga timid!
2. Ugaadhsade x Ugaadhsade
Haddii aad doorato taxanaha asalka ah ama dib-u-habeynta, Ugaarsade x Ugaadhsade waa shay aad hubaal jeceshahay hadii aad jeclaan lahayd Halyeeyga tacliinta .
Tani waa taxane anime-ku-saleysan faneed-ku-saleysan oo leh waxyaabo badan oo la mid ah Kubbadda Dragon , oo waad ogtahay inaan kugula talinay taas horeyba .
Ugaarsade x Ugaadhsade waa saacad nasasho leh kaftan badan, tacabiiro, iyo dagaal taas oo ah sababta aan si buuxda ugu talineyno.
Khuseeya: 23+ Hunter x Hunter T Shaati si aad u cusbooneysiiso Ururintaada Anime
Nooc kale, Yū Yū Hakusho wuxuu leeyahay xaalada mid ka mid ah taxanaha anime ee ugu muhiimsan waqtiga oo dhan.
Yū Yū Hakusho waa taxane taariikhi ah oo ka soo baxay 90-meeyadii oo isku daraya fanka dagaalka iyo waxyaabo ka sarraysa dabeecadda, taas oo dhinaca ay ugu egtahay Biliij .
Bandhigu waa mid gebi ahaanba u baahan in la arko dhammaan taageerayaasha anime haddii uusan ahayn sheekadiisa, ka dibna muhiimada taariikhiga ah.
Khuseeya: Liiska Ugu Dambeeya ee Yu Yu Hakusho wuxuu soo xiganayaa inuu qarax kaa siinayo qaraxa
Sheekada Son Goku waa lagu sii waday Dragon Ball Z , oo ka waramaya dhacdooyinka Son Goku intii uu qaangaaray.
Dejintu aad ayey isugu egtahay oo astaamo badan oo duug ah ayaa soo noqday, laakiin hanjabaaduhu waa cusub oo aad uga khatar badan yihiin.
Halka Kubbadda Dragon wuxuu ahaa sheeko soo socota oo da'da ah, Dragon Ball Z waa sheeko superhero ah oo raacda xiisaha Goku si looga badbaadiyo Dunida khataraha kaladuwan ee kala duwan.
5. Nin Hal-Punch ah
Sheekada nin noqday qof awood leh oo uu ku dili karo qof kaliya hal feedh waa qorshaha ugu weyn ee Nin Hal-Punch ah .
Wuu ku caajistay taas aawadeed wuxuuna si joogto ah ugu hammuun qabaa tartan dhab ah.
Nin Hal-Punch ah waa mid aad loo jecel yahay waana mid aad isugu dheellitiran isaga taxanaha fanka dagaalka.
Waxaa jira kaftan badan oo wanaagsan oo aan hubno inaad ku raaxeysan doontid daawashada.
La xiriira: Casharo Nolol Fudud Oo Laga Baran Karo Mid Ka Mid Ah Nin Punch Ah
Masashi Kishimoto waa qoraaga wali sharciyeyn kale oo leh saddex qaybood.
Naruto wuxuu raacayaa Naruto Uzumaki, oo ah halyeeyga caanka ah ee xayeysiinta, intii uu yaraa iyo raadinta inuu noqdo kan ugu fiican shinobi (ninja) adduunkiisa.
Naruto wuxuu la macaamilaa dhalinyarada Naruto wuxuuna u arkaa inuu u bislaaday halgame weyn, in kasta oo wadadiisu aysan ku dhawaanin dhameystirka dhamaadka silsiladan.
La xiriira: 13+ Astaamayaasha Anime ee Muranka badan dhaliyay ee waligood Soconaya Warshadaha
7. JoJo’s Riwaayaddii yaabka lahayd
Nooc kale oo ka mid ah liiska, JoJo’s Adventizka Bizarre malaha waa taariikhi ahaan cinwaanka ugu muhiimsan liiskan. Oo ay la socdaan asalka ah Kubbadda Dragon .
Bandhigani wuxuu sidoo kale diirada saaraa fanka dagaalka iyo dagaalada laakiin wuxuu leeyahay waxyaabo cunsuriyad sarre leh oo kadhigo mid gaar ah.
Bandhigu waa wax lala yaabo, sida cinwaanku u leeyahay, laakiin hab wanaagsan oo leh taxaddarro ficil oo weyn.
Sheekada Naruto ayaa lagu sii wadaa Naruto: Shippuden,
markan waxay u aragtaa dagaal qadiimi ah oo Naruto ah oo aan naftiisa kaliya ahayn, laakiin sidoo kale mustaqbalka iyo badbaadada adduunka shinobi (ninja)
Shippuden wuu mugdi badan yahay oo qaan gaar yahay, wuxuu leeyahay sharwadayaal ka wanaagsan iyo sheekooyin daran oo daran maadaama wax badan oo ka mid ahi khatar ku jiraan.
Waxay sidoo kale leedahay dabeecad aad u wanaagsan waxayna la socotaa isbeddelka Naruto qaab weyn, ugu dambeyntiina waxay u aragtaa inuu fulinayo riyadiisii ​​carruurnimo.
9. Fullmetal Alchemist: Walaalnimo
Alkeemiste Buuxda waa sheeko xariif ah, qalbi jecleysi ah oo labo walaalo ah oo doonaya inay dunida caawiyaan. Dabcan, hagaaji khaladaadkii ay horay u galeen.
Asalka Alkeemiste Buuxda waxay leedahay dhamaad asal ah maxaa yeelay waxay hawada soo gashay kahor intaan la dhameystirin manga.
Dhanka kale, Walaaltinimada wuxuu raacayaa manga asalka ah.
Midkee habboon inaad daawato? Labadaba, hadaad na weydiiso!
La xiriira: 30 Ka Mid ah Hadallada Sheeko-Xeeldheer ee Alchemist ee ugu Fiican ee Noloshaada macno ku yeelan doona
10. Hal shey
Hal Cad maahan anime fanka dagaalka, laakiin sheekada Daanyeer D. Luffy iyo shaqaalihi burcad badeeda.
Waa mid ka mid ah taxanaha anime iyo manga ee ugu caansan waqtiga oo dhan.
Dagaal badan ayaa jira, laakiin diirada lasaarayo xiisaha burcad badeedka weyn, horumarinta astaamaha, iyo baadi goobka hanti dheer oo qarsoon.
Taasi waa ujeeddada ugu dambeysa ee bandhigga oo dhan.
Waxaad si buuxda u raaxeysan doontaa Hal Cad xiisaha ay u muujineyso darteed. Dheeraad ah - runtii waa cinwaanka ugu xiisaha badan liistadan.
11. Fasalka Dilista
Fasalka Dilista waa taxane yaab leh, laakiin waan jecel nahay.
Ujeeddada ayaa ah in koox ka mid ah ardayda dugsiga sare ay dilaan macallinkooda guriga, oo ah noole u eg octopus oo ku dhaartay inuu adduunka hal sano ku burburin doono.
Intuu barayo qolka guriga, wuxuu kaloo baraa sida loo dilo.
Bandhigu waa mid qosol badan, wuxuu leeyahay casharo farabadan oo nolosha ah, iyo in kasta oo sifo layaableh - waxaan kuu ballanqaadaynaa inaad caabudayso!
Khuseeya: 10 Sababood Oo Koro Sensei U Yahay Macallinka Dugsiga Ugu Wanaagsan Ee Aad Weligaa Soo Martay
Haddana qayb kale oo ka mid ah sheekadii asalka ahayd ee Toriyama, Dragon Ball Super sii baadha Goku iyo horumarkiisa.
Super deggan yahay moolka Goku asalkiisii ​​oo u sii dheereeya inuu yahay badbaadiyaha Dunida.
Tixdani waxay sidoo kale dejineysaa kuwa kala duwan waxayna leedahay Goku inuu gaaro heerka rabbaaniga ah ee dagaalka ugu xoogan Dunida.
Wuxuu wajihi doonaa wuxuush, qaraabo, iyo xitaa ilaahyo wuxuuna maamushaa inuu noqdo kan ugu fiican, waana sababta aan wali u jecel nahay asaga iyo sheekooyinka Toriyama.
Khuseeya: Haddii Aad Jeceshahay Dragon Ball Super, Waad Ku Dhici Kartaa Jacaylka Kuwani 7 Muuqaal Anime
Dragon Ball Super PVC Taalada Super Saiyan God SS Vegito Ku adeego Amazon Wax dheeri ah baro Waxaan ka kasbanaa komishan Amazon & shirkadaha kale hadii aad wax ka iibsato adigoon qarash dheeraad ah kugu fadhiyin.
Anime sidoo kale wuxuu ku saleysan yahay cunsurro ka sarreeya oo wuxuu leeyahay goob taariikhi ah.
InuYasha waxay leedahay muuqaalo dagaal oo kugu filan si ay kuu xiiseyso haddii aad jeceshahay Halyeeyga tacliinta .
InuYasha waa nooc ka mid ah qadiimiga oo runtii u qalma inaad fiiro gaar ah u yeelato sababtoo ah sheekadiisa weyn iyo sheekooyinka hodanka ah ee ay abuureyso iyo sawirada.
Waxaa laga yaabaa inaad la qabsato qaabkii hore, laakiin xaqiiqdii waa u qalantaa.
Hadda, Boruto waxaa laga yaabaa in lagu murmo badan oo ka mid ah taageerayaasha adag ee Naruto
Taasi waxay tiri, taxanaha diirada saaraya wiilka Naruto Uzumaki, Boruto Uzumaki, wali waa talo naga timid.
Waxaan u maleyneynaa inay gabi ahaanba mudan tahay in la daawado.
Sheekada iyo qaabku way kala yara duwan yihiin, jilayaasha ugu waaweyn waxay ka yimaadeen jiil cusub oo ka mid ah shinobi (ninja), laakiin wali waa isla adduun iyo isku meel.
Biliij waa nooc mugdi ah oo ka mid ah cinwaannada liiskan ku yaal.
Waxay leedahay farshaxanno fara badan iyo walxaha dagaalka, laakiin waxay diiradda saareysaa dabeecadda sare, maaddaama halyeeyada Ichigo ay tahay inuu la dagaallamo jinniyo kala duwan iyo kuwa kale ee ka soo horjeeda si uu u badbaadiyo adduunkiisa iyo asxaabtiisa.
Biliij waa xulasho weyn haddii aad doorbideyso sheeko qoto dheer oo hubaal waxaa lagugu jiidan doonaa adduunka Tite Kubo haddii aad tallaal siiso.
Anime Kale Sida My Hero Academia:
NANA bilaa hibo ah.
Xidigle mataano ah oo la baxsho.
Tanna, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa maqaalkeenna.
Hadaad jeceshahay Halyeeyga tacliinta , hubaal waad ku raaxeysan doontaa dhammaan cinwaannada ku jira liistadaan oo maaddaama qaar ka mid ah cinwaannadu aad u dheer yihiin, waxaad heli doontaa waxyaabo aad ku raaxeysato in muddo ah.
Ha ilaawin inaad na raac!
Websaydhka qoraaga: fictionhorizon.com
KALIYA 12 Anime Sida Weerarkii Titan Waa inaad Bilaabaa Daawashada
5 Casharro Nololeed oo ka socda Halyeeygeyga Akadeemiyada si aan kaaga dhigo Qof wanaagsan
nambarka 1 anime ee waqtiga oo dhan
My Hero Academia Cosplay Fashion Casual Caawinta Sare Kabaha Canvas Deku Ochako Asui Ku adeego Amazon Wax dheeri ah baro Waxaan ka kasbanaa komishan Amazon & shirkadaha kale hadii aad wax ka iibsato adigoon qarash dheeraad ah kugu fadhiyin.
jacaylka ugu fiican nolosha anime
ugu fiican loogu magac daray anime ee waqtiga oo dhan